Zimbabwe Archives - Page 7 of 18 - Weekly Xposé
2017-11-23 2017-11-24 WeeklyTeam	Comment(0)
BEIJING, November 22 – China said on Wednesday that it respects Robert Mugabe’s decision to resign as Zimbabwe’s president, a week after the African country’s army and Mugabe’s former political allies moved to end his four decades of rule. The 93-year-old Mugabe had clung on for a week after an army takeover, and […]
HARARE, Zimbabwe, November 22 — Zimbabwe’s recently fired vice president was set to return Wednesday to be sworn in as the country’s new leader, after Robert Mugabe announced his stunning resignation in the middle of impeachment proceedings against him. Zimbabweans erupted in response Tuesday, cheering and dancing in the streets late into the night, thrilled […]
JOHANNESBURG, November 21 – Embattled Zimbabwe President Robert Mugabe resigned on Tuesday, finally ending days of speculation about his future — the big question that arises is “what now?”. Speaker of the Zimbabwe Parliament Jacob Mudenda made the announcement when the two Houses of Parliament — Upper and Lower — were seated at the Harare […]
HARARE, November 21 – The resignation of Zimbabwean President Robert Mugabe on Tuesday marked the dawn of a new era for Zimbabwe, the country’s ruling Zanu-PF said, adding that a new president would be announced soon. “Speaker of Parliament Jacob Mudenda announced at a joint sitting of The House of Assembly and The Senate that […]
Expectant crowds gather in Harare ahead of likely impeachment proceedings
HARARE, November 21 – The mood outside Parliament in the Zimbabwe capital Harare was festive on Tuesday afternoon ahead of the pending sitting that is expected to begin the process of impeaching President Robert Mugabe. A large crowd had gathered around lunchtime ahead of the 2:15pm sitting. Supporters put aside their political differences to unite in sending […]
Africa In The News Opinion
The ongoing saga of a Mugabe removal with its many jolts and twists evidences a meandering tale of fumbling on part of Zanu PF war veterans, that still has Mugabe in power. On Thursday November 16, 2017 we were unexpectedly informed that Zimbabwe Defence Force under the leadership of General Constantino Chiwenga has effectively taken […]